omn – Welcome to bilisummaa
Kabaja waggaa 1ffaa OMN magaalaa Jiddaa
——————— Miidiyaa walabaa ummata oromoo OMN eerga hundaa’ee kan wagggaa tokko lakkoofsiise kaleessa magaala jiddaatti sirna hoo’aan kabajamee ooleera. Anis kabaja guyyaa kanaa irraa waanin …
Hangaatuu.com ISISiin hagoogamte
ISIS: marsaa (hangaatuu.com) gaazeexeessaa Abdusamaal Suuteen taligamtu qoqqotee seenuun akeekkachiisaa gubbatti maxxanse..
OMN anniversary you can watch live just click the link below
Hundeeffama Wagga Tokkoffa OMN moo kuffinsaa OMN wagga tokkoffa booda jedhama laata?
Ashama harka fuune jaallewan kiyya iddo jirtanittii Nageeyyi koo kan onnerra madduu isiin haa qaqabuu jecha yaada fi Oduu tokko isiniif dabarsuun barbaada. Dura otuu …
27/02/2015 060/01//2015 Gara Oromiyaa midea Netwok Dhaabbiilee siyaasaa kan bilisummaafii walabummaa Oromiyaa tiif qabsaawaniif. -Gootota Qeerroo dargaggootaa,Kan bilisummaa fii Dimocracy, …
OMN kan ummataan dhaabbatee fi kan ummataa waan ta’eef namni fedhe haala adeemsaa irratti yaada mataa isaa kennachuu mirga qaba.
OMN(Oromia Media Network) dhugaa ummata Oromoo tan dhokatte ifa baasuuf ummataan ummatumaaf erga dhaabbatee Waggaa bira achi taree jira. Jalqaba irraa kaasee hanga ammaattis dhugaa …
Dubbii OMN fi Tokkummaa Ilaalchaa Mooraa QBO
Malkaa Caffee TV-n OMN (Oromia Media Network) erga hundeeffamee tamsaasa isaa jalqabee waggaa 1 guutuuf guyyoota muraasatu isa hafa. Hundeeffamni TV kanaa Media Walaba kan …